ပလုံ | ZAYYA
လမ်းလည်း လမ်း၊ ပန်းလည်း ပန်းတိုင် →
တစ်ခဏတာ ကိုသာ မြင်သူ အတွက် အတိတ် ဟာ စွဲညိ မနေဘူး။ တစ်ခဏတာ ကို မိမိ ရရ ရှုမှတ် နိုင်သူ အတွက် အနာဂတ် လည်း မလိုအပ်ဘူး။ အတိတ်၊ အနာဂတ် ရှိ မနေသူ အတွက် ဘယ် မေးခွန်းမှ မပေါ်ပေါက် ဘူး။ ဒါကြောင့် အဲ့လူဟာ ဘယ် အဖြေကိုမှ ရှာ မနေတော့ဘူး။မေးခွန်း၊ အဖြေ ရှာဖွေ နေသမျှ ရပ်တန့်သွား တဲ့ ခဏကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ကြုံတွေ့ရတယ် ဆိုဦး။ ပူလောင် အိုက်စပ် တဲ့ ကန္တာရပြင် ထဲ အချိန်ကြာမြင်အောင် ဝဲလှည့်နေတဲ့သူ တစ်ယောက် – အိုအေစစ် ထဲ ဘွားခနဲ ရောက်သွား ရသလို သိသာ နေလိမ့်မယ်။ အချိန်ကာလရဲ့ အချုပ်အနှောင် ကြား မျောလွင့်နေရာ ကနေ ဝုန်းခနဲ လွတ်ထွက် ကင်းရှင်း သွားကြောင်း မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။
The Frog jump out.
အလို ရွှေဖား ခုန်ဆင်းသွား၊
ဒီ ဟိုက္ကုရဲ့ နောက်ဆုံး ပါဒ – “ပလုံ” ရဲ့ နောက်မှာ ဘာ လိုအပ် သေးသလဲ။ ဒီ ခဏ မှာ – ကာလ ရော၊ ဒေသ ရော၊ အညွှန်းဘောင် အားလုံး ချုပ်ပျက် ပြီးသား ပြည့်စုံပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက်က ဒီတစ်ခဏ ကို ရှင်းရှင်း မြင်နိုင်ဖို့လေး တစ်ခုတည်း။
“Becomes the Ocean” Essay 4.
August 28th 2012 at 9:57 PM